FARITRA BOENY : Arina fandrehitra manodidina ny 1000 gony no avoakan’ny fikambanana GAR
Na eo aza ireo trangana doro tanety mahazo laka any amin’ny Faritra Boeny iny dia ezahina hatrany ny fitarihana ny tantsaha hamboly hazo, hanao taozavatra afaka mifandraika amin’ny tontolo iainana manodidina ka ahafahana mikajy izany. 10 octobre 2019
Toy ny ao amin’ny fokontany Ambalambakisiny, Kaominina Andranofasika Distrikan’ Ambato Boeny izao dia misy ny fambolen-kazo amina hektara maro manodidina ny 86 ha ataona mpikambana miisa 80 izay azo avadika ho arina fandrehitra avy eo ka mampidi-bola ny mponina. Anisany tohana goavana karakarain’ny tetik’asa fanamafisana ny fahaiza-manao iatrehana ny fiovan’ny toetr’andro PRCCC, ao anatin’ny fandaharanasa fanohanana ny fitantanana ny tontolo iainana PAGE izao ny fanohanana ny tantsaha ao anatin’ny fikambanana mpamboly hazo GAR Ezaka.
Nanomboka tamin’ny taona 2009 ny mpikambana miisa 80 no nanomboka namboly hazo, ny taona 2016 kosa ny fanombohan’ny fanapahana hazo izay azo avadika ho arina. Ny karazan-kazo kininina no hazo fambolena ary mbola mandalo fikarakarana sy dingana maro izay vao azo avoaka amidy hatao fidiram-bolan’ny mpikambana. Tamin’ny voalohany namoahana ny vokatra dia voalaza fa manodidina ny 80 eo ho eo ny arina vita raha toa ka efa mahatratra 1000 mihitsy izany ankehitriny. Isaky ny enina taona no mahazo manapaka ala izy ireo ary manodidina ny 15000 ar ny vidin’ny arina iray gony .
Azo lazaina fa manampy betsaka ny fiharian’ny mponina izany ary efa samy manana ny anjara asany daholo ny mpikambana rehetra ka tsy dia mananosarotra intsony ny fiaraha-miasa ao anatin’ny dingana arahina mandrapaha tafavoaka ny vokatra, hoy ny Filohan’ny GAR Ezaka Andriamahatratra Falihery. Tsara hatrany moa ny manamarika fa tohana avy amin’ny PAGE/GIZ, vondrona Eoropeanina sy ny minisitera Federalin’ny fiaraha-amiasa ara-toekarena sy fampandrosoana Alemana na BMZ no mamatsy vola ny mponina ao anatin’izany rehetra izany.